သူနာပြုသော ဗုဒ္ဓ (Kyaw Thu) | MoeMaKa Burmese News & Media
တာထွက် - ၃၅ ဂါရဝ - ၅၄
သူနာပြုသော ဗုဒ္ဓ (Kyaw Thu)
ဇူလိုင် ၂၄၊ ၂၀၁၂
နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)၏ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသည် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့သည့် ရဟန်း ရှင်လူ အများပြည်သူတို့အတွက် ဆေးဝါး (အခမဲ့) ကုသပေးနေသကဲ့သို့ မြန်မာပြည် အနယ်နယ် အရပ်ရပ် (ပြည်မြို့၊ မော်လမြိုင်ကျွန်း၊ ပဲခူးတိုင်း၊ ဧရာဝတီတိုင်း) ဒေသများရှိ ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းနှင့် ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကွန်ယက်သဖွယ် တတ်စွမ်းသ၍ လက်ဆင့်ကမ်း ကုသိုလ်ကောင်းမှုများကို ပြုလုပ်ပေးလျှက်ရှိသည်။
၂၅. ၄. ၂ဝ၁၂ ရက်နေ့တွင် စတင်၍ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပဲခူး)သည် နာမကျန်းဖြစ်နေသော အများပြည်သူ ရဟန်းရှင်လူတို့အား ဆေးဝါးကုသမှုကို စမ်းသပ်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ရာမှ ယနေ့ ၂၂. ၇. ၂ဝ၁၂ (တနင်္ဂနွေနေ့) နံနက် ၈း၃ဝ နာရီအချိန်တွင် ပဲခူးမြို့၊ ဒက္ခိဏသာခါရာမကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်းတွင် “သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပဲခူး)” ဟူ၍ ပဲခူးမြို့ရှိ ဆရာဝန်ကြီးများ၊ အလှူရှင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ သူနာပြုများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျန်းမာရေးကုသမှုဖွင့်ပွဲအား ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
အခမ်းအနားတွင် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး ပဲခူးမြို့မှ ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာ နီနီအေး တို့မှ ဖဲကြိုးဖြတ် ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် အများပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးအား ယခုကဲ့သို့ ဝိုင်းဝန်းကူညီ လှူဒါန်းကုသမှုများ ပြုလုပ်ပေးကြသော အလှူရှင်များ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆရာဝန်ကြီးများအား အထူးကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်း၊ ဇွန်ပန်းရုံအောက်တွင် လှည်းဘီးနစ်နေသည်။ ကူ၍တွန်းကြပါ ဟု ဆိုစကားရှိသော်လည်း ဘက်ပေါင်းစုံမှ ဝိုင်းဝန်းတွန်းကြပါက လှည်းဘီးသည် နစ်သည်ထက် နစ်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် ဦးတည်ချက်၊ ရည်ရွယ်ချက်လားရာ တစ်ဖက်တည်းသို့ ဝိုင်းဝန်းညီညွတ်စွာ တွန်းကြပါမှ မိမိတို့ လိုရာပန်းတိုင်သို့ ရောက်မည်ဖြစ်ကြောင်း ကြွရောက်လာကြသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များအား အမှာစကားပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့နောက် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး အထွေထွေရောဂါကုဆေးရုံကြီး ပဲခူးမြို့မှ ဆေးရုံအုပ် ဒေါက်တာ နီနီအေး မှ အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ရောဂါဝေဒနာရှင်များအား ကုသပေးရင်းနှင့် တပြိုင်နက်တည်း ထိုရောဂါအသီးသီးတို့အား မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်နည်း၊ ဂရုစိုက်နည်း ပညာပေးမှုများကို ပြုလုပ်သွားပါက အများပြည်သူတို့၏ ကျန်းမာရေးအတွက် ပိုမိုထိရောက်မည်ဖြစ် ကြောင်းဟူ၍ အဖိုးတန်စကားရပ်အား ချီးမြှင့်ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း (ပဲခူး)အတွက် လှူဒါန်းထားသော အလှူရှင်များအား ဂုဏ်ပြုလွှာများ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း အခမ်းအနား ကျင်းပပြုလုပ်ပြီးနောက် နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) အတွင်းရေးမှူး ဒေါ်ရွှေဇီးကွက်မှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားရာတွင် မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်၌ ရဟန္တာတစ်ပါး၏ဖြစ်ရပ်အား သာဓကအဖြစ် ပြောကြားခဲ့ရာ တစ်ပါးသူအား မနာလိုဝန်တိုစိတ်ဖြင့် ပြုလုပ်ခဲ့သော ဝဋ်ကြွေးကြောင့် ဘဝတိုင်း ဘဝတိုင်း အပယ်ဘုံသို့ကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက် လူ့ဘဝသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိချိန်တွင်လည်း ထိုသူ၏ အကုသိုလ် အကျိုးဆက်သည် သူ၏ အနီးအနား ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသော အိမ်ခြေတစ်ထောင်ခန့်အထိ ရိုက်ခတ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့် အကုသိုလ်အကျိုးဆက်သည် အိမ်ခြေတစ်ထောင်အထိ ရိုက်ခတ်ခံခဲ့ရသကဲ့သို့ ကုသိုလ်အကျိုး ဆက်သည်လည်း အိမ်ခြေတစ်ထောင်အထိ ခံစားနိုင်ပါကြောင်း သာဓကအဖြစ် ပြောကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ပထမဦးဆုံးသော ခြေလှမ်းအဖြစ် ယခုကဲ့သို့ ပြည်မြို့၊ ပဲခူးမြို့၊ ကြို့ပင်ကောက်မြို့များတွင် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ခွဲ)များအား ဖွင့်လှစ်ရခြင်းမှာ ထိုဒေသများတွင် ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးဝါး ကုသပေးနိုင်သော ဆရာဝန်ကြီးများရှိခြင်းနှင့် ယင်းမြို့များ၏ အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မြို့များ၊ ရွာများအထိ ကျယ်ပြန့်စွာ ကုသမှုကို ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ကြောင်းအပြင် ယခုကဲ့သို့ ကိုယ်ကျိုးမဖက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ကုသိုလ်ဖြစ်ကုသပေးကြသော ဆရာဝန်ကြီးများ၊ သူနာပြုများ၊ အလှူရှင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ အားလုံးတို့အား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း(ပဲခူး)၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးသူရိန်ဝင်းမှ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်း၊ ငွေစာရင်းရှင်းတမ်းအား ဘဏ္ဍာရေးမှူးမှ ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်းတို့ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကာ အခမ်းအနားအား ပထမပိုင်းအစီအစဉ်အဖြစ် ရုပ်သိမ်းခဲ့ကာ ကြွရောက်လာကြသော ဧည့်သည်တော်များတို့အား သက်သတ်လွတ် သီးစုံထမင်းဖြင့် ဧည့်ခံကျွေးမွေးခဲ့သည်။
ထို့နောက် အခမ်းအနား ဒုတိယပိုင်းအဖြစ် ကြွရောက်လာကြသော လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့ ၂ဝ ဖွဲ့တို့နှင့် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရဟန်းသံဃာတော်များနှင့်အတူ လူမှုရေးနှီးနှော ဖလှယ်ပွဲအား ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆက်လက်ကျင်းပခဲ့သည်။ ယင်းအခမ်းအနားတွင် ပဲခူးမြို့တွင် နာရေးကိစ္စရပ်အား မီးသင်္ဂြိုဟ်ခြင်း အခက်အခဲများ၊ ဆေးဝါးကုသရာတွင် ကြုံတွေ့ရသောအခက်အခဲများအား ဝိုင်းဝန်းအကြံပေး ညှိနှိုင်းခဲ့ကြသည်။ ယင်းလူမှုရေးနှီးနှောဖလှယ်ပွဲ၏ ရလဒ်သည် ပဲခူးမြို့တွင် မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်အသစ် တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် နာရေးကူညီမှုအသင်း (ရန်ကုန်)မှ အတတ်နိုင်ဆုံး ကူညီပံ့ပိုးပေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်လိုက်သည့်အပေါ် ဒေသခံ ရဟန်းရှင်လူ မိဘပြည်သူအပေါင်းတို့မှ သာဓု .. သာဓု .. သာဓု ဟု အနုမောဒနာ ခေါ်ဆိုလိုက်သံသည် သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း (ပဲခူး) တည်ရှိရာ ဒက္ခိဏသာခါ ရာမကျောင်းတိုက်ဝင်းအတွင်း မြည်ဟီးသွားခဲ့ပါတော့သည်။
ဂီလာနပုဂ္ဂိုလ်တို့အား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းသည် ငါဘုရားအား ပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းမည်ပေ၏ ဟူသော မြတ်စွာဘုရားရှင်၏ ဆိုဆုံးမအတိုင်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းများ အနေဖြင့် လူမျိုးဘာသာ၊ ဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးတို့အား (အခမဲ့) ပြုစုစောင့်ရှောက်ကုသပေးခြင်းသည် သူနာပြုသောဗုဒ္ဓ၏ လမ်းစဉ်အတိုင်း လျှောက်လှမ်းကြသော ဗြဟ္မစိုရ်ခြေလှမ်းများပင် ဖြစ်တော့သည်။